Ndepụta Email: Nzọụkwụ 13 Tupu Click Pịa Ziga! | Martech Zone
Fraịde, Ọktọba 7, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Anyị na-ebipụta ọtụtụ ozi email kwa izu na ndị na - agụ akwụkwọ anyị agbawaala ihe karịrị ndị debanyere aha 4,700! Achọrọ m ịkekọrịta ndụmọdụ anyị na nyocha anyị na-aga kwa izu tupu ịpị bọtịnụ izipu ahụ.
Bụ ọdịnaya gị kwesiri, mkpa, na-atụ anya, na ihe bara uru ka onye debanyere aha? Ọ bụrụ na ọ bụghị - mgbe ahụ ezigala ya!
Ozugbo izipu ozi email, enwere naanị ihe abụọ nke onye natara ya na-ahụ… nke mbụ bụ onye email ahụ. Bụ nke gị site na aha agbanwe agbanwe na ozi ọ bụla? Adreesị email gị ọ nwere ike ịmata?
Ihe nke abuo bu nke gi Usoro isiokwu. Ọ bụ ịgba ịnyịnya ibu? Ọ bụ usoro isiokwu na-adọta uche ha ma mee ka ha chọọ ịmeghe email iji gụọ nnukwu ọdịnaya n'ime? Ọ bụrụ na ọ bụghị, folks ga-ehichapụ ya n'oge a.
Ọ bụrụ na ị nwere onyogho, ị na-etinye n'ọrụ mkpado alt dee ederede ọzọ nke ga - eme ka onye na - agụ ya budata ihe oyiyi ahụ ma ọ bụ nwee ike ịme ihe na - enweghị ihe oyiyi?
Nhazi gị ọ dị mfe ịgụ na a ngwaọrụ mkpanaka? Ihe dị ka 40% nke ozi ịntanetị niile gụrụ ugbu a na ngwaọrụ mkpanaka ma ọnụọgụ na-aga n'ihu na-eto eto kwa afọ. Y’oburu n’inwe ozi sara mbara nke nwere ogologo ntughari ederede, onye na - aguta ihe gha acho iwe iwe ya ihu na iru. Ihichapụ nhichapụ dị mfe.
Ọ bụrụ na ị na-eziga email na usoro HTML, enwere ezigbo njikọ na nkụnye eji isi mee maka folks pịa na lee email na ihe nchọgharị?
You nyochara email ahụ maka mkpoputa, ụtọ asụsụ na izere okwu nke nwere ike ime ka ị nụchaa ya n’ime nchekwa ozi Junk Email?
Kedu ihe ị chọrọ ka onye na-agụ ya mee mgbe ha gụsịrị email ahụ? You nyere nnukwu akpọ-na-eme ka ha mee ihe ahụ?
Enwere ozi ndị ọzọ ị nwere ike ịjụ onye na-agụ maka nke ahụ ga-enyere gị aka iche na nke ọdịnaya ị na-ezipụ? Kedu ihe kpatara na ị naghị ajụ maka otu ozi na email ọ bụla?
Ndi ama anam nwalee email na ndepụta na na-ejighi data iji hụ etu njiri ahaziri nkeonwe na ngosipụta ọdịnaya siri ike? Ndi njikọ ahụ niile rụrụ ọrụ?
Na-eme ozugbo nweta isi ma ọ bụ ịda mba site na paragraf nke iwe iwe na-ekwu? Ndị mmadụ na-arụsi ọrụ ike - kwụsị igbu oge!
You na-enye ndị mmadụ otu ụzọ na-apụ apụ nke nkwukọrịta email gị? Ọ bụrụ na ọ bụghị - ịkwesịrị iji nnukwu ikike dabere na ikike onye na-enye email.
You na-enye ndị mmadụ otu ụzọ nke ịkesa ọdịnaya ma obu site na iziga na bọtịnụ enyi ma ọ bụ bọtịnụ ikesa mmekọrịta? Ma oburu na ha kesara - ebe nbudata gi nwere ntinye aka na ya?
M debanyere aha na wepu aha na ozi ịntanetị oge niile. Ana m enyekarị otu ụlọ ọrụ uru nke obi abụọ mgbe m debanyere aha mana ozugbo m hụrụ na m na-ehichapụ ọtụtụ ozi ịntanetị site na ha n'ihi na ha abaghị uru… M wepụrụ aha m na anaghị m azụ ahịa ọzọ na ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ n ’ị ga - ezigara mmadụ ozi - jiri nkwanye ugwu na nsọpụrụ oge ha bipụtara ma bipụta nnukwu ozi email!